August 23, 2021 4666
चर्चित टिकटक स्टार स्मारिका ढकालको वैवाहिक सम्वन्ध टुटेको छ । धेरै दिनदेखि उनको डिभो`र्सको चर्चा टिकटकमा व्याप`क थियो, तर उनले आधि`कारिक रुपमा केही बताएकी थिइनन् ।
स्मारिकाका श्रीमान विवेक अधिकारीले हिजो टिक`टकमै लाइभ आएर आफूहरुको सम्व`न्ध अ`न्त्य भएको बताए । डिभो`र्सको कारण भने उनले खुलाएका छैनन् । ‘अब आ–आफ्नै हिसाबले करिअर अगाडि बढाउने भनेर हामी आपसी सम`झदारीमा नै छुट्टिएका हौं,’ उनले भने, ‘अहिले पनि एक–अर्कालाई घृ`णा गर्दैनौं ।’
डिभो`र्सको चर्चासँगै टिकटकमा स्मारिकाले धेरै न`कारात्मक प्रतिक्रि`याहरुको पनि सामना गर्नुप`रेको थियो । आफू सेलिब्रिटी भइसकेपछि श्रीमानलाई छोडेको आ`रोप कतिपयले उनलाई लगाएका छन् । विवेकले यो विषयलाई लिएर विषयमा आफ्नी पूर्व`पत्नीलाई कुनै प्रकारको लाञ्छना नलगाउन आग्रह गरे ।
‘नाम र पैसा कमाएपछि श्रीमानलाई छोडिस भन्ने जुन आरोप लगाइएको छ, त्यो बिलकुल गलत हो,’ उनले भने, ‘यस्तो गलत आरोप लगाउन बन्द गरिदिनुहोला ।
झापा बुधबारे निवासी स्मारिका र विवेकबीच केही वर्षअघि ‘प्रेम प्लस मागी’ बिहे भएको थियो । नजिकै घर भएका दुवैले एक–अर्कालाई मन पराए`पछि परिवारको सहमतिमा परम्परा`गत तवरले विहे भएको हो । विहे गर्दा स्मारिको उमेर १८ वर्षको मात्र थियो । उनी`हरुका सन्तान भएका छैनन् ।
स्मारिका टिक`टकमा हिट बनेकी विवाहपछि हो । कलेज पढाउने श्रीमान र परिवारले आफूलाई टिक|टकमा सँधै सपोर्ट गर्ने गरेको स्मारिक`ले विभिन्न अन्तरवार्तामा बताएकी छन् ।स्मारिका र समारिकाको जुम्ल्याहा जोडी नेपालमा अत्यधिक रुचाइएको टिकटक सेलिब्रिटीमा पर्छ । स्मारिका दिदी र समारिका बहिनी हुन् । समारिकाको बिहे भएको छैन ।
नृत्य र अभिनयमा पोख्त यी दिदीबहिनीकोे फ्यान फलोइङ लोभ`लाग्दो छ । स्मारिका ढकालको टिक`टक अकाउन्टमा करिब साढे ६ लाख फलोअर्स छन् ।पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा पनि यो ट्विन्स जोडी डिमान्डेड छ । छोटो समयमा उनीहरुले दर्जनभन्दा बढी म्युजि|क भिडियोमा अभिनय गरिसकेका छन् ।
युट्यूवमा यो जोडले पोस्ट गर्ने सर्ट भिडियोहरु पनि हिट छन् । ‘सिस्टर्स बि लाइक’, ‘देउरानी–जेठानी’, ‘मम्स बि लाइक’ जस्ता कन्सेप्टमा भिडियो बनाएर उनीहरुले चर्चा कमाएका थिए । समारिका स्मारिकाको युट्यूव चाइनलमा २ लाख ९४ हजार सब्स्क्रा`इबर्स छन् ।
टिकटकमा लाइभ आएर स्मारिकाका पूर्वपति विवेक अधिकारीले यसो भनेका थिएः
म कुनै सेलिब्रिटी नभएर आम मान्छे हुँ । मिडियामा आएर बोल्न मन पनि थिएन । तर, स्मारिका र मेरो सम्बन्धको विषयमा धेरै जनाले जिज्ञासा राख्नुभयो ।
तपाईंहरुको माया र साथले नै उ त्यो ठाउँमा पुगेको हो । अहिले उस`लाई टिकटकमा ला|इभ आउँदा धेरै ‘एब्यूज’ भएको सुनिरहेको छु । म आफू पनि कोही–कोही बेला हेर्छु । सम्वन्ध तोडिए पनि हेरिन्छ । धेरैले नरा`म्रो कमेन्ट गर्नु`भएको हुन्छ ।
पैसा कमाइस, सेलिब्रिटी भइस, अनि बुढा छोडिस् भन्ने कुराहरु आएका छन् । यो बिलकुल गलत हो । यो कारण होइन । त्यसैले यस्तो इल्जाम लगाइदिन बन्द गरिदि|नुस ।
म लगायत मेरो परिवारको सपोर्ट नभएको भए उ त्यो ठाउँमा पुग्थेन । सम्व`न्ध तोडिनुमा सबैका आफ्ना पर्सनल समस्या हुन्छन् । त्यो सबै भनिरहनु पर्ने जरुरत छैन । सम्वन्ध तोडिएको हो । हामी आफ्नै ढंगले आ–आफ्नो करिअर अघि बढाउँ भनेर आपसी समझदारीमा राजी-खुशीले छुट्टिएका हौं ।
अहिले पनि एक–अर्कालाई घृ`णा गर्दैनाै‌। उसको पनि करिअर राम्रो होस । भविष्य राम्रो होस । उसले पनि मेरो विषयमा यही चाहन्छ होला सायद । उसलाई कुनै ब्ले`म नलगाइदिनुस । – नेपाल प्रेस बाट
Prevयी युवतीले कमाउँछिन् घण्टाको १२ लाख ! उनको कर्म थाहा पाउँदा चकित पर्नुहुनेछ
Nextमिसकलबाट माया बसेपछि २० वर्षका युवकले ६० वर्षीय महिला`सँग बिहे गरे
टिकटकमा भेटिइन साम्राज्ञि जस्तै युवती, को हुन उनी ? हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
लोकगायिका कृष्ण परियार यस्तो अवस्थामा,छोरिको निधन,श्रिमानले छाडे,भाईको यो अवस्था (भिडियो हेर्नु’स्)
‘राजा आउ देश बचाऊ’ भन्दै धामीझाक्री र माताहरुले देखाए यस्तो चर्ति-कला (हेर्नुहोस् भिडियो)